လရာသီဖွားများ၏ အချစ်နှင့်ဖူးစာရှင် | Ta Pwint Pan
ဆရာစံဇာဏီဘို၏ လရာသီအချစ်ထဲက ကောက်နှုတ်တင်ပြအပ်ပါသည်။
ကုမ်ရာသီဖွား အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Aquarius)
ဇန်န၀ါရီ (၂၀) မှ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၉) ရက် ကြားမွေးဖွားသော ကုမ်ရာသီဖွားတို့သည် အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း၊ တစ်ဖက်စွန်းကျလွန်းခြင်းများကြောင့် နှလုံးသားရေးရာတွင် ချစ်ဒုက္ခ ကြုံတတ်သည်။ သန့်စင်သော နှလုံးသားနှင့် တစ်ပါးသူအပေါ်မေတ္တာ ထားလင့်ကစား ကံဇာတ်ဆရာ မှ မိမိအား အလွမ်း၊ အဆွေးသမားဖြစ်အောင် ဖန်တီးမည်။သူအပေါ် အနိုင်မယူ၊ အခွင့်အရေး မယူ မိမိကသာ အနစ်နာခံတတ်သည်။ ရံဖန်ရံခါတွင် လက်တွေ့ထက် စိတ်ကူးယဉ်မှုဘက်ရောက်သွား တတ်သည်။ ထိုရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ်လုံးကိုဖန် လှပတင့်တယ် ၍ မျက်ဝန်းအလွန်လှ ပြီး မျက်လုံး၊ မျက်ခုံးကောင်း နဖူးပြင်ကျယ်ပြန့်ကာ အေးချမ်းချိုသာစွာပြောဆိုတတ်သူနှင့် ဖူးစာဆုံမည်။
မိန်ရာသီဖွား အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Pisces)
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၀) မှ မတ်လ (၂၀ ) ကြားမွေးဖွားသော မိန်ရာသီဖွားတို့သည် အလွန်အေးချမ်းမြင့်မြတ်သော နှလုံးသာပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ လွန်လွန်ကဲကဲ သံယောဇဉ် ကြီး၍ တစ်ပါးသူအပေါ် နားလည်ခွင့်လွတ်တတ် သော သူဖြစ်သည်။အခိုင်- မာဆုံးဖြတ် ၍ လေးလေးနက်နက်ချစ် တတ်သောသူဖြစ်သည်။ အရှက်အကြောက်ကြီး ခြင်း၊ တစ်ပါးသူက ဝေဖန်မည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းကြေ- င့် အမှန်တကယ် ချစ်သူအပေါ် ဖွင့်မပြောရဲ၊ လက်မတွဲ ရဲတတ်ခြင်းသည် ပကတိအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ထိုရာသီဖွားတို့သည် ကိုယ်အေးချမ်ပြီး ဥာဏ်ပညာရှိသော ဆံပင်ထူပွပွ၊ သွားစွယ်၊ သွားတက်ရှိသောသူနှင့် ဖူးစာဆုံမည်။
မိဿရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Aries)
မတ်လ(၂၁) မှဧပြီ(၁၉)ရက်ကြားမွေးဖွားသော Aries များ၏အချစ်ဘ၀လမ်းသည် အလွန်ကြမ်းတမ်းလှသည်။ အခက်ခဲများ၊အတိုက်ခံများကို အဆင့်ဆင့်ကျော်လွှားရပေမည်။ အဓိကအားဖြင့်အသက်(၁၉)နှစ်မတိုင် မီထိ အချစ်ကိုကစားစရာ၊ ရင်ခုန်စရာအဖြစ် သတ်မှတ်မိသဖြင့် စိတ်အနှောက်အယှက်များကြုံမည်။ အသက်(၂၀)မှ(၂၃)နှစ်ကြားတွင် မိမိချစ်သောသူက တစ်ယောက်၊ မိမိအပေါ် ချစ်သူကတစ်ယောက် အဖော်မဲ့နေသောကြောင့် သနားချစ်နှင့်လက်တွဲပေးနေရသူတစ် ဦးဆိုသကဲ့သို့မေတ္တာလမ်းကြောင်းများရှုပ်ထွေးနေမည်။
အသက်(၂၀) နှင့်(၂၃)များတွင် မိမိဘ၀၏တစ်ဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲများကြုံပြီး မိမိချစ်သူများနှင်. မိမိအကြားဘ၀ကွာခြားမှုရှိမည်။ အသက်(၂၃)မှ(၂၅)နှစ်အကြား နှလုံးသားချင်း ထာဝရ လက်တွဲနိုင်သူ များရှိလာမည်။အချစ်ဦးမဟုတ်လင့်ကစား အချစ်ဆုံးကိုတွေ့ရှိလာမည်။ အချစ်နှင့်အချစ်စစ်ကိုခွဲခြားသိ ရှိလာလိမ့်မည်။ အသက်(၂၆)နှစ်နောက်ပိုင်း မေတ္တာရေးလမ်းကြောင်းသည်တစ်စတစ်စ ချောမွေ့လာလိမ့်မည်။ အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကချစ်သူများကိုကြိုးစားမေ့ ဖျောက်ရင်း အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကိုတစ်ပါးသူများေ နှာက် ယှက်သည့်ကြားမှချစ်သူနှင့်မရရအောင် ပေါင်းစည်းပေးသော ကံဇာတ်ဆရာ၏စီမံမှုကို ပျော်ရွှင်စွာခံယူရမည်။ Aries ရာသီဖွား ၇၅%သည် မည်မျှအဆင်ပြေသော အနေအထားရှိစေ ကာမူနှစ်ဦးသဘောတူလ က်ထပ်ပြီးမှမိဘတို့ စီစဉ်ပေးမှု နှင့်လက်ထပ်ရတတ်သည်။ မိဿရာသီဖွားများသည် ပညာအတတ်ရှိပြီး စိတ်ကောင်းရှိသော်လည်းဘုဂွပြောတတ်ကာ၊ ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူများနှင့်ဖူးစာဆုံမည်။ အသားလတ်လတ်၊နှာတံပေါ်၊မျက်ဝန်းအိအိ မျက်ရစ်ပါသည်ဆိုရုံလေးပါပြီး မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းကာ ဆံပင်ပါးပါးဖြောင့်ဖြောင့် ၊နှုတ်ခမ်းတွင်မှဲ့ပါသောသူနှင့်ဖူးစာ ဆုံမည့်အချစ် ဘ၀အား ပိုင်ဆိုင်ထား သည်။
ပြိဿရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Taurus)
ဧပြီ(၂၀) မှ မေ(၂၀)ကြားမွေးေ သာ Taurus ရာသီဖွားများ၏ အချစ်ဘ၀သည်လွယ်မယောင်နှင့် ခက် တိမ်မယောင်နှင့် နက်လှသည်။ ဘ၀တွင်အရာရာတွင်မိမိကသာပေးဆပ်ရန် လူ့လောကသို့ဖန်တီးကြရောက်လာသည့် အလားငယ်စဉ်ပျိုရွယ်နုနယ်သောဘ၀မှသည် အရွယ်နှင့်မမျှအောင် မိသားစု မောင်နှစ်မသားချင်းများအပေါ်လွန် လွန်ကဲကဲပေးဆပ်ရမှုကြောင့် မိမိကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်း၊ခံစားချက်အချစ်ဘ၀ကို ရှေ့တိုးရန်ခက်ခဲပေမည်။ ၅၂၈ နှင့် ၁၅၀၀ မေတ္တာလွန်ဆွဲမှုဒဏ်ခါးစည်းခံရမည် ။ ပျိုရွယ်သောကာလတွင် ဘ၀တိုးတက်မှု အတွက် အချစ်ကိုဦးစားမပေးခဲ့။ ချစ်သူခင်သူပေါလင့်ကစားမိမိက မေတ္တာမမျှရဲသလိုဖြစ်မည်။ ထို့အပြင် မိမိ၏ချစ်တတ်သောနှလုံးသားအပေါ်လှည့်စားသူများ အပျော်ချစ်လိုသူများ၊အသည်းခွဲလိုသူများ၏ အန္တရာယ်ကြားတွင်ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရမည်။ Taurus ရာသီဖွားများသည် နီးစပ်မှုရှိသောသူများနှင့်မေတ္တာရည်မျှရသောသဘာဝရှိသည်။ နေထိုင်မှု၊ဖြတ်သန်းမှု၊နေရာချင်းနီးသောသူများနှင့်ဖူးစာဆုံတတ် သည်။ မိမိရွေးချယ်သောသူနှင့်သားချင်း မိဘကြား အဆင်မပြေမှုများကြားမှ ချစ်သူကိုလက်တွဲရမည့်အချစ်ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်မည်။ အခက်ခဲများမည်မျှရှိစေကာမူ အချစ်ဘ၀သည် အလှအပနှင့်နိဂုံးချုပ်ရပြီးချစ် သူနှင့်ပေါင်းဖက်ရကိန်း ရှိသည်။ အချစ်အတွက်အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်း အငြိုအငြင်ခံရသည့်ကြားမှ အေးချမ်းသော အောင်မြင်သော အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကိုရရှိမည်။အသက် (၁၆၊၁၈၊၂၁၊၂၃၊၂၆၊၂၈၊၃၁၊၃၅၊၃၇)နှစ် များတွင် နှလုံးသားထိခိုက်စရာများ၊အချစ်ဘ ၀၏အခက်အခဲများ၊စိတ်အနှောက်အယှက် များကြုံမည်။ Taurus ရာသီဖွားများသည် အသားလတ်လတ်၊ဆံပင်ထူထူ၊ဆံပင်လှို င်းတွန့်ရှိသော အရပ်သွယ်သွယ်နှာတံပေါ်၊ နှုတ်ခမ်းလှကာ နှာခေါင်းဘေး (သို့)ပါးတွင်မှဲ့ပါသော သူနှင့်ဖူးစာဆုံမည့်အချစ်ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင် သည်။
မေထုန်ရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Gemini)
မေ (၂၁) မှ ဇွန် (၂၀) ရက်ကြားမွေးသည့်မေထုန် ရာသီဖွား Gemini တို့၏အချစ်ဘ၀သည် အလွန်ဆန်းကြယ်လှသည်။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးလမ်းကြောင်းတွင်အလွန်ခက်ခဲနှောင့်နှေးတတ်သော်လည်း အိမ်ထောင်ရေးတွင်ချမ်းမြေ့စရာများပြည့်နှက်နေသည်။ အချစ်ဘ၀တွင် အကောင်း အဆိုးဖြစ်ရပ်တို့သည် နေ့ရက်နှင့်အမျှပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသည်။ မိမိနှင့်မိမိချစ်သူကြား အဓိကပြသာနာမရှိသော်လည်းမိမိတို့နှစ်ဦး၏အချစ်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူအလွန်များသည်။ မေထုန်ရာသီဖွား ကျား၊ မ မရွေး မိမိထက်အသက်ကြီးသောသူများနှင် ကံဆုံစည်းရတတ်၏။ မေထုန်ရာသီဖွားအမျိုးသားများသည် ရွယ်တူ၊ငယ်သူထက် မမ ဇာတ်လမ်းကိုဦးစားပေးက ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချစ်ဘ ၀ကို ရရှိမည်။ အသက်(၁၈) မှ (၂၂) နှစ်ကြားတွင် အချစ်ဘ၀သည်မချောမွေ့ပါ။ ချစ်သူများ ယာယီမကြာခဏခွဲရခြင်း၊ပြသနာများကြုံခြင်း၊ မတူညီသောဘ၀အ နေအထား၊၀န်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် အခြေခံသောအဆင်မပြေမှုများကြုံခြ င်းများရှိမည်။ အသက် (၂၂) မှ (၂၄) နှစ်ကြားတွင်ဘ၀တည်ငြိမ်လာပြီးအသက်(၂၆) နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် မေတ္တာအချစ်ရေးရာများအေးချမ်းအဆင်ပြေမည်။ အသက်(၁၈၊၂၂၊၂၄၊၂၇၊၃၁) နှစ်များတွင်မည်မျှအဆင်ပြေ နေသော အနေအထားရှိစေကာမူ ကြံဖန်စိတ်သောကဖြစ်စရာများ
အချစ်ဘ၀သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဘ၀တွင်အမြဲရွေးရခက်အောင် အခွင့်အလမ်းနှစ်ခွပေါ် တတ်သည်။နှလုံးသားနှင့်ဦးနှောက်လွန်ဆွဲ ပွဲတွင် နှလုံးသားကအနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မ ည်။ မိမိအပေါ်အလွန်ချစ်သော၊အရာရာစွှန့်လွှတ်ရဲသော၊ မိမိအတွက်ဘ၀တစ်ခုလုံးပေး ဆပ်သော၊ အနစ်နာခံသော၊ မိမိအလိုမှန်သမျှဦးစားပေးသောသူ နှင့် ဘ၀ဆုံစည်းမည်။ မေထုန်ရာသီဖွား အများစုသည် အသက်၊ ဂုဏ်၊ ၀န်းကျင်၊လူမျိုး၊ ဓလေ့မတူ ကွာခြားသောသူများနှင့်ဖူးစာဆုံေ သာအချစ်ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်သည် ။ နှူးညံ့စွာပြောဆိုသော၊မျက်လုံးအိမ်အနည်းငယ် နက်ရှိုင်းသော၊မျက်ဝန်းလှပလင်းလက်ပြီး နဖူးနှင့်မျက်ခုံး၊ နှာတံဆက် စပ်မှုအလွန်တင့်တယ်သော၊ နှုတ်ခမ်းမထူမပါး၊နှုတ်ခမ်းစေ့ေ နတတ်သော၊သွားစွယ်ရှိသော၊ သပ်ရပ်တင့်တယ်စွာနေတတ်သော သူနှင့်ဖူးစာဆုံမည်။
ကရကဋ် အချစ်အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Cancer)
ဇွန် (၂၁) မှ ဇူလှိုင် (၂၂) ကြား မွေးသော Cancer များ၏ အချစ်ဘ၀သည်ဒဏ္ဍာရီဆန်လှပေသည် ။ လက်တွေ့ဘ၀ကို မေ့လျော့ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာလေးကို နုနုရွရွလေးတည်ဆောက်လိုသည်။ နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘ၀နှင့် အချစ်ဘ၀တို့ကိုသီးခြားထားပြီးလူ တစ်ကိုယ်ဘ၀နှစ်ခု နှင့်နေသောသူများဖြစ်သည်။ အချစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပျော်ရွှင်ကြည်နှူးခြင်း၊၀မ်းနည်းခြင်း၊ထိခိုက်ခံစားရခြင်း အလုံးစုံကို တသသ ခံစားလိုသောစိတ်ကြောင့်မလိုလားအပ်သောအနှောင့်အယှက်ရှိမည်။အချစ်ဘ၀တွင်နှလုံးသားကိုလွန်လွန်ကဲကဲဦးစားပေးရန်မသင့်တောင်္ပေ။ ထို့အပြင်ရုပ်ဝထ္ထုပိုင်းဘက်ဦးစား ပေးလွန်းခြင်းကိုလည်းရှောင်ပါ ။အချစ်နှင့်အချစ်စစ်ကိုမခွဲခြားနိုင်သမျှမိမိအချစ်ဘ၀မဖြောင့်ဖြူးပေ။ Cancer ရာသီဖွားများသည် အသက် (၂၂) နှစ်မတိုင်မီဘ၀ချင်းကွာခြားပြီး မတူညီသောအနေ
အထားကိုအချစ်ဆိုသောအ ရာနှင့်ဇွတ်အတင်းညှိကာအချစ်ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရင်းအချစ်အိမ်မက်၊ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတည်ဆောက်မည် ။ လက်တွေ့နှင့်ကွာဟသောကြောင့်စိတ် ညစ်ဖွယ်များနှင့် သာကြုံမည် ။ မိမိကိုယ်တိုင်က အသည်းကွဲခြင်းကိုခံစားလိုသောကြောင့်အသည်းကွဲမည်။ အသက် (၂၂) မှ (၂၆) နှစ်ကြားမေတ္တာရေးတွင် တည်ငြိမ်လိုသောဦးနှောက်ခံစားချက်ရှိသော်လည်း နှလုံးသားတောင်းဆိုမှုကြောင့်မကြာခဏစိတ်ပြောင်းရမည်။ ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသားအားပြို င်မည်။ အသက် (၂၆) နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း အချစ်အိမ်မက်မှ နိုးထကာ လက်တွေ့ဆန်သောဘ၀သို့ဦးတည်မည်။ သတိပြုရန်မှာ Cancer ရာသီဖွား ၄၀% သည်အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ကျတတ်သည်။ပထ မအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သတ်ပြီးငွေကြေးများရတတ်သည်။အမွေကဲ့သို့ရမည်။တရားရုံးမှရမည်။ Cancer ရာသီဖွားများ၏အချစ်ဘ၀သည် အချစ်ဝထ္ထု ရုပ်ရှင်ထဲမှဇာတ်ကောင်များ သဖွယ် တွေ့၊ ချစ်၊ ကြိုက်၊ ကွဲ၊ ပြန်ဆုံ၊ အရွေးရခက်၊နောက်ဆုံးအခြေအနေအပေးဆုံးသူနှင့်ဇာတ်သိမ်းရတတ်သည်။ အလွမ်းဘက် ဦးတည်ပြီးချစ်သူကို အကြောင်းတစ်စုံတစ်၇ာနှင့်စွန့်လွှတ်ကာ သူတစ်ပါးကအပြစ်မပြောနိုင်သော ဖြစ်စဉ်အကြောင်းပြချက် များနှင့် ငွေကြေးဓနပြည့်စုံ သူကိုအိမ်ထောင်ပြုပြီးကာမှချစ်သူဟောင်းကိုတသသ ကိန်းကြုံမည်။ အသက် (၁၈) မှ (၂၀) ကြား၊ (၂၂) မှ(၂၃) ကြား၊ (၂၅) မှ(၂၆)၊ (၃၀) မှ (၃၁) ကြား၊ (၃၂) မှ (၃၃) ကြား ကာလများတွင်အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ၊ မေတ္တာရေးအညံ့ရှိမည်။
အခြားကာလများတွင်ကြီးမားသောအညံ့ မရှိပါ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တောင့်တင်း၊ မျက်နှာဝိုင်းကာ အသားလတ်၊ နှုတ်ခမ်းလှပပြီး သွားစွယ်၊ သွားတက်ရှိသောသူနှင့်ဆုံဆည်းဖူး စာဖက်ရမည်။
သိဟ်ရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Leo)
ဇူလှိုင် (၂၃) မှ သြဂုတ် (၂၂) ကြားမွေးဖွားသော Leo များ၏ အချစ်ဘ၀သည်အလွန်ပကာသနဆန်လှသည်။ခ န့်ထည်သောကျောရိုးဇာတ်လမ်းပေါ်တွင် ဂုဏ်၊ ရာထူး၊အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ဓန အလုံးစုံပြည့်နှက်နေသည်။ ထို့အပြင် ယင်းတို့၏ အချစ်ဘ၀သည် သဘာဝဆန်လှသည်။ အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားမည်။ ရင်ထဲမှအချစ်ကိုအချစ်နှင့်သာတန် ဖိုးဖြတ်မည်။ထို့ကြောင့် သိဟ်ရာသီဖွားအားလုံးသည် အများက အံ့သြစေလောက်အောင်ပင်ပကာသန ၀န်းကျင်ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့်ြ ကားမှ တစ်ပါးသူမထင်မှတ်ထားသည့်မိမိထက် နိမ့်သော မိမိကိုချစ်လွန်းသောသူအားဘ၀ဖော် အဖြစ်ရွေးချယ်မည်။ အချစ်ဘ၀တွင် ချစ်သူဘ၀ရောက်၊ ထို့နောက်တစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက် ကွဲပြီး မှပြန်လည်အဆင်ပြေသောကွာစေ့ဇာတ်လ မ်းကြုံမည်။ မိမိခွင့်လွတ်တတ်ခြင်းအပေါ်ချစ်သူက အခွင့်ရေးယူမှုများလွန်းသောကြော င့် ဝေးကွာခွဲခွါကြရပြီး မာနခြင်းပြိုင်နေရာမှ နှလုံးသား၏
စိတ်စေစားမှုကြောင့်နောက်ဆုံးပြန်ဆုံ ကြရမည်။ အသက် (၁၇၊၁၉၊၂၀၊၂၁၊၂၃၊၂၄၊၂၇၊၂၉၊၃၂၊၃၇ ) နှစ်များတွင်နှလုံးသားမေတ္တာရေးတွင် အလွန်စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ရာများကြုံတွေ့မည်။ အဆိုပါကာလများမှတပါး အခြားသောကာလများတွင် ကြီးမားသောအညံ့မရှိပါ။ အသက် (၂၅) မှ (၂၉) ကြား၊ (၃၀) မှ (၃၂) ကြားကာလများတွင်အလွန်ကောင်းသော ခိုင်မာသော ဘ၀များကို အချစ်ထံမှရယူထားသောစွမ်းအင်နှင့်တည်ဆောက်နိုင်ပေမည်။ သိဟ်ရာသီဖွားအများစုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုဂယက်ကို ဂရုမထားသော်လည်း မိမိဘ၀မိမိမာနကိုထိပါးလာလျှင်လည်းကောင်း၊ မိမိအချစ်အားတန်ဖိုးမထား၊မိမိပေးသည် ကိုအရနည်းသည် ဟုယူဆသောသူနှင့်တွေ့ ပါကလည်း
ကောင်း၊အချစ်ကိုအမုန်းဘက်သို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်တတ်သည်။ အလွန်စိတ်ကြီးခြင်းနှင့် မာနရှိခြင်းတို့ကြောင့်ရံဖန်ရံခါအသည်းကွဲရ၊ ချစ်လျှက်နှင့်ခွဲရတတ်ပြန် သည်။ အသားဝါ၀င်းကာအမြဲတမ်းပြုံး နေသော အလွန်မျက်နှာချို သော်လည်းမာနရှိကာ ပြတ်သားသော မေးရိုးပါးရိုးနှင့် နှာတံပေါ်သော၊ ခေတ်ဆန်ဆန် သွက်သွက်လက်လက်ပါးပါးလှပ်လှပ် ပညာဥာဏ်ရှိသောသူနှင့် ဖူးစာဆုံမည်။
ကန်ရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Virgo)
သြဂုတ် (၂၃) မှ စက်တင်ဘာ (၂၂) ကြားမွေးဖွားသော ကန်ရာသီဖွား Virgo များ၏ အချစ်ဘ၀သည် ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ကောင်းလှပေသည် ။ ရွှေပုံပေါ်စံလျှက် ခြွေရံသင်းပင်းများအကြား အထီးကျန်အသည်းကွဲဒဏ်ခံစားနေရသူများမှာ ကန်ရာသီ ဖွားများဖြစ်သည်။ အချစ်ကိုယုံစားမည်။ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့်သူများကြားမှအချစ်ဆုံးသူကိုရွေးရမည် ။ ချစ်သူ၏စကား၊ ချစ်သူ၏ကတိ ၊ ချစ်သူ ၏ မိမိအပေါ်ထားရှိသည့်ယုယမှုများသည်အနှိူင်းမဲ့ဖြစ်မည်။ တစ်ပါးသူများက မိမိကိုအချစ်ကံကောင်းလေစွဟုပြော ကြမည်။ မိမိကိုအားကျ
လိမ့်မည်။ စံတင်ခံရသောအတွဲလေးဟု အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။မိမိကလည်းချစ်သူလိုအင် မှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့် မည်။ အတိတ်ဘ၀မှမိတ်ဆွေများ၊အသိုင်းအ၀ိုင်းများ၊ မိမိအား အလွန်မြတ်နိုးသောချစ်သူများ…အား လုံး၊ အားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးမေ့ပစ်ကာချစ်သူနှင့် မိမိ တစ်ဘ၀တည်ဆောက်မည်။ သူခေါ်ဆောင်ရာဝန်းကျင်၊ သူ့ဘ၀၊ သူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ဝင်ရောက်မ ည်။ အရာရာပေးအပ်ကာဘ၀ပုံအပ်မည်။ အလွန်ပျော်ရွှင်မည်။ ချစ်သူကတည်ဆောက်ပေးသောဘ၀သည်အရာရာလိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ကံဇာတ် ဆရာသည်အချစ်ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည် ။ ချစ်သူကအချစ်သစ်ရှာလိမ့်မည်။ အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမှမရှိသော ၊ ပြောစ၇ာဆိုစရာ တစ်လုံးတပါဒမှမရှိသောမိမိအားအကြွင်းမဲ့ဥပေကာပြုပစ်ခွါစွန့်ခွါမ ည်။ဂုဏ်၊ စည်းစိမ်၊အခြွေရံတို့အားလုံးထား ပေးခဲ့လျှက် အရာရာပြည့်စုံစေလျှက် မိမိရင်ထဲမှနှလုံးသားတစ်ခုကိုသာလျှင်ထုတ်ယူနင်းချေတစ်စစီဖဲ့ြေ ခွခြင်းကိုခံစားရမည်။ ပြန်လည်စိတ်လည်လာနိုးနှင့် တစ်စစ အချစ်ဘ၀သည်အိုမင်းရင့်ရော်လာပြီးအထီးကျန်ဆန် သောဘ၀ကိုရောက်မည်။ အချစ်ဆိုသောအရာတွင်ဦးနှောက်တွက်ချက်မှု ပါဝင်ခဲ့သောအမှား ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ကာ အချစ်စစ်ကိုမှမစဉ်းစားမဝေဖန်တတ် သော ဦးနှောက်နှင့်
နှလုံးသားအပေါ် အပြစ်ဖို့နေရမည်။ လူအများကသူအချစ်ဘ၀ကံခေလိုက်တာဟု ပြောကြပေဦးမည်။ မည်သို့ဆိုစေ ကန်ရာသီဖွားများသည် အသက် (၁၈၊၂၀၊၂၃၊၂၅၊၂၇) နှစ်များအတွင်း ထောင်ပြုခြင်းမပြုပါနှင့်။ ထိုကာလတွင်စတင်လိုက်သောအချစ်အိမ်ထောင်သည်မမြဲ၊ အသက် (၂၆၊၂၉၊၃၀) နှစ်များတွင်အချစ်ဘ၀သည်အလွန်အေး ချမ်းမည်။ အသက် (၃၂) မှ (၃၇) နှစ်ကြား တဖန်အချစ်ဘ၀သည်မအေးချမ်းပေ ။ ထိုအသက်နောက်ပိုင်းတွင် အညံ့မရှိတော့ပါ။ နှုတ်ခမ်းပါးကာစကားတတ်သောဖူးစာရှင်နှင့်တွေ့မည်။ သွယ်သွယ်ပါးပါးလှပ်လှပ်
အေးတိအေးစက်နေတတ်ကာ မျက်လုံးမျက်ခုံးကောင်းသောသူဖြစ်မည်။
တူရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Libra)
စက်တင်ဘာ (၂၃) မှ အောက်တိုဘာ (၂၂) ရက်ကြားမွေးဖွားသည့် တူ ရာသီဖွား Libra များ ၏အချစ်ဘ၀သည် အကောင်းအဆိုးများရော ထွေးနေသည်။ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ပရိယာယ်များဖြင့် အပေးအယူပြုသောအချစ်ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်မည်။ မိမိကိုယ်ကိုချစ်သောအချစ်ထဲမှ အချို့ကို တစ်ပါးသူသို့ပေးမျှချစ်သောအချစ် ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်မည်။ ပင်ကိုဘ၀သည်အရာရာပြီးပြည့်စုံပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ မိမိ၏ထက်မြက်သောစိတ်ကူးဥာဏ်ရည်၊ ကျယ်ပြန့်သောအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ချင့်ချိန်တတ်သောဥာဏ်ရည်အလုံးစုံသည် မိမိအတ္တမာနကိုတစ်စစကြီးထွားစေသည်။ ဘ၀ မာနကိုထိပါးလာသည့် မည့်သည့်အရာမဆိုမိမိမဆောင်ရွက်။ ကန် ရာသီဖွားအမျိုးသမီးများသည် ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသောကမ်းလှမ်းသူများချစ်သူများအကြားမိမိအချစ်သည်မျက်နှာပန်းလှ လှပေသည်။ စဉ်းစားပါရစေဦး ၊အခင်အမင်လေးမပျက်စေချင်ဘူး၊ ဒီလိုလေးဆက်ဆံရင်တော်ရော ပေါ့၊ အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့စဉ်းစား တာပေါ့…….စသည့်စကားများဖြင့်အား လုံးသောသူများအပေါ်နှစ်သိမ့်ချွေးသိပ်ကာ မြွေမသေ၊ တုတ်မကျိုးအချစ်မျိုးနှင့်ရှေ့လ ည်းမတိုးသာ နောက်လည်းမဆုတ်သာအောင်ပရိယာယ်မာ ယာနှင့် ချည်နှောင်မှုပြုလိမ့်မည်။ တစ်စစမိမိကြိုးရှည်ရှည်နှင့်လှန်ထားမှန်းသိကာ နောက်ပိုး ပိုးသူများနည်းပါးသွားချိန်ငါ အခက်ရချေရဲ့ဟုသုံးသပ်မိကာ အလျှဉ်းသင့်သလိုမီရာအဆင်ပြေရာကိုအကောင်းဆုံး
မဟုတ်လင့်ကစား အကောင်းဆုံးနီးပါးတော့ရှိလေရဲ့ဟုတွက်ချက်ချိန်ဆပြီးဘ၀ရှေ့ဆက်ရလိမ့်မည်။ ကန်ရာသီဖွားအမျိုးသားများတွင်မူ မိမိစိတ်ကြိုက်တစ်ပါးသူအမြင်နှင့်မတူသောရှုထောင့်မှ ရွေးမည်။ ရွေးချယ်လိုက်သောချစ်သူသည်မိမိဝ န်းကျင်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်၊မိမိအရွေးမှား သည်ဟုဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြလိမ့်မည် ။ မိမိလက်အတွင်းရောက်လာမှအလွန်ထက် မြက်မည်။ အခိုက်မသင့်ကသူမသည်မိမိအသည်းကို ခွဲလိမ့်မည်။ အချုပ်ဆိုရသော် ကန်ရာသီဖွားများ၏အချစ်ဘ၀သည်
ဦးနှောက်အမြော်အမြင်တွက်ချက်မှုချိန်ဆမှု၊ တွေးဆမှု များလွန်းကာ ရတာမလို လိုတာမရ ဖြစ်မှုများကြောင့် အသက် (၂၀၊၂၂၊ ၂၅) နှစ်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။ ထိုကာလသုံးခုမှတပါး အခြားကာလများတွင် ဆုံးဖြတ်ပါကအချစ်ဘ၀ချောမွေ့လိမ့် မည်။ ပညာတတ် ဥာဏ်ကြီး ၊ စကားပြောကောင်း၊ အကြွားအ၀ါကောင်း၊ ဟန်ကောင်းပြီး မျက်နှာ လေးထောင့် နှာတံပေါ်ကာမျက်ရစ်မပါသော (သို့) မျက်လုံးမှေးကာအမြဲပြုံးနေသောသူ နှင့် ဖူးစာဆုံမည်။
ဗြိ စ္ဆာရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Scorpio)
အောက်တိုဘာ (၂၃) မှ နိုဝင်ဘာ (၂၁) ကြားမွေးသော ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား Scorpio များ၏ဲအချစ်ဘ၀သည် မိမိကိုခွင့်မလွတ်နိုင်သူများ၊ မိမိကအသည်းခွဲလို့ကြေကွဲသူ များ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေသောဘ၀ပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ပါးသူမဆိုထားနှင့် မိမိကိုယ်မိမိပင်မချစ်တတ်ေ သာ တန်ဖိုးမထားတတ်သောအချစ်ကိုပိုင် ဆိုင်သည်။ ပြုံးပြုံးလေးနှင့်ကိုယ်မဟုတ်သလိုတဇွတ်ထိုးရက်စက်ခြင်း ၊ အေးစက်စက်နှင့် တစ်ပါးသူကြေကွဲအောင်လုပ်ခြင်း၊ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစကားများ၊ ဝေဖန်ခြင်းများကိုလေးနက်စွာနားေ ထာင်နားယောင်ကာ နာရီပိုင်း
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းစိတ်ပြောင်းတတ်ခြင်း…တို့သည်ဗြိ စ္ဆာရာသီဖွားတို့အချစ်ဘ၀ဇာတ်လမ်း ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိကတစ်ပါးသူ ကိုမည်မျှချစ်သည်ဟုဆိုစေကာမူအားလုံးကမိမိကိုအချစ် ဗီလိန်လူကြမ်းဟုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပစေကိုယ်စိတ်ချ မ်းသာမည်၊ ကိုယ်မှန်မည် ဟုယူဆပါက ကိုယ့်ဘ၀နှင့်ကိုက်ညီမည့်သူအပေါ် ချစ်ရန်ဝန်မလေးပေ။ချစ်သူရှိပါကသဲသဲလှုပ်ချစ် မည်။ ချစ်သူထက်ပိုသာသောသူပေါ်လာပါက……. .ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဘ၀ချင်းခြားနေပြီ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူး ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်….
ဒါပေမယ့်….ဒါပေမယ့် ဟူသောစကားများကိုနောက်ဆုံးပြော ပီး ချစ်သူသစ်နောက် တကောက်ကောက်၊ထိုချစ်သူထံမှနောက် ချစ်သူထံသို့လည်းပြောင်း၊ အချစ်ဘ၀သည် အပြောင်းအလဲများလှပေသည်။ မည်မျှချစ်သူများစေကာမူနောက်ဆုံးအိမ်ထောင်ပြုလိုက်သူ မှာအထူးကောင်းသည်။ အသည်းနှလုံးသည်မည်မျှအပြောင်းအလဲများစေကာမူဦးနှောက် သည်တသမတ်တည်း၊ ချစ်တိုင်းယူစရာမလို၊ ညားစရာမလို၊ ကိုယ့်အတွက်၊ ငါ့အတွက်၊ ဘ၀အတွက် တစ်စုံတစ်ရာအတိုင်းအတာထိပံ့ပိုး ပေးနိုင်သော အချစ်ငတ်သူသည်သာ
မိမိ၏ ချစ်သူဖြစ်ရမည်ဟုယူဆတတ်သည် ။ ထိချုစ်သူထံသို့အလွန်ပြင်းထန်သောအချစ်ဆိပ်များ ထိုးသွင်းကာ ကကြိုးရုပ်သဖွယ် ကိုင်တွယ်ကာမော့မော့လေးလေး ပြုံးပြုံးလေး ဘ၀တွင် ထာဝရနေသွားမည့် အချစ်ဘ၀ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗြိစ္ဆာရာသီဖွားများ၏ အချစ်ဘ၀ကိုကံဆိုးသူဟုလုံးဝမပြော နိုင်ပေ။ ကိုယ်ကသာ အသည်းခွဲသူဖြစ်မည်။ သို့သော်မေတ္တာစူးတတ်သည်။ ၀ဋ်လည်တတ်သည်။ အသက် (၁၇၊၁၉၊ ၂၁၊၂၃၊၃၁၊၃၅၊၃၉၊၄၄၊၄၇) နှစ်များတွင်အချစ်ဝဋ်ခံရတတ်သည်။ နှာတံပေါ်ကာ နှုတ်ခမ်းပါးသော၊ အေးချမ်းရိုးသားစွာနေတတ်သော၊ သွက်လက်သော၊ မျက်လုံးဝိုင်းစက်လှပသော၊ နှုးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြောဆိုတတ်သော၊ အိနြေ္ဒကြီးသောသူများ နှင့်ဖူးစာဆုံမည်။
ဓနုရာသီ အချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Sagittarius)
နိုဝင်ဘာ (၂၂) မှ ဒီဇင်ဘာ (၂၁) ကြားမွေးသော ဓနုရာသီ Sagittarius များ၏ အချစ်ဘ၀သည် အလွန်နားလည်ရန်ခက်လှသည်။ မိမိကအနိုင်ရပြီး မိမိကို အမြဲအရှုံးပေး မည့်သူအား ဦးနှောက်နှင့်နှလုံးသားပေါင်းစ ည်းကာ ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်လေ့ရှိ သော အချစ်ဘ၀အားပိုင်ဆိုင်သည်။ တဇွတ်ထိုးအချစ်သမားဖြစ်သည် ။ မိမိကိုအလေးပေးမှူအား အလွန်လိုလားသည်။ အလွန်သ၀န်တိုတတ်သည်။ ချစ်သူနှင့်တွေ့သောအခါ ပီယ၀ါစာ ချစ်စဖွယ်တီတီတာတာမပြောပဲ ရန်ဖြစ်၊စိတ်ကောက်၊မနာလို၊သ၀န်ေ ကြာင်၊မျက်နှာပုတ်၊ မျက်ရည်ကျ ဆူဆောင့်အနိုင်ယူပြပြီးချော့မော့ ခံ ရန်စောင့်နေသောသူဖြစ်မည်။ ကြာလာသော အခါမိမိချစ်သူက မိမိအားတွေ့ရ စကားပြောရမှာပင်စိုးရိမ်လာလိမ့် မည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်မဆိုး ရ၊ စိတ်မကောက်ရ၊ ရန်မဖြစ်ရ၊ အနိုင်မကျင့်ရလျှင် စားမ၀င်အိပ်မပျော်တတ်သောမိမိသဘာ ၀သည် မိမိအသည်းနှလုံး အားဟတ်တက် ကွဲစေမည်။ ငြူစူစောင်းမြောင်း မြည်တွန်တောက်တီး၊ စိတ်ကောက်တတ်သူကို မည်သူကဘ၀အဖော် အဖြစ်ဆက်ဆံလိုမည်နည်း။ ထိုအရာများ ကိုပြင်မှသာလျှင်အချစ်ဘ၀ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀မှာဖြောင့်ဖြူးလိမ့်မည်။ မိမိသည်ချစ်သူပေါမည်။ မိမိဒဏ်မခံနိုင်သူလည်းများ မည်။ လူစွမ်ကောင်းလုပ်ကာမိမိဒဏ်ခံသူ လည်းဒုကရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော် ထူးခြားသည်မှာ ဓနုရာသီဖွားများကို ချစ်သူများက
တသသ စွဲလန်းချစ်ကြလိမ့်မည်။ ရာသီဖွားများက မျက်နှာသာပေးလိုက်လျှင် အားလုံးပြုံးပျော်ကြမည်။ အဆိုးဖြစ်ခဲ့သမျှအလုံးစုံမေ့ပျောက်သွားမည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာအ၀ှမ်းနက္ခတ်ပညာ ရှင်များက ဓနုရာသီဖွားများသည် …… အချစ်နတ်ဆိုး၏ သင်ကြားပေးလိုက်သောမာယာပရိ ယာယ်၊ တပ်ဆင်ပေးလိုက်သောမှော် မျက်ဝန်းအစုံနှင့်နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည် ဟုဆိုသည်။
အချစ်ကဝေများဟုလည်းသတ်မှတ် သည်။ အချစ်ကိုလည်းကောင်း ၊ ချစ်သူကိုလည်းကောင်းအသုံးချကာဘ၀ကိုထူထောင်လိုသူဟု သတ်မှတ်မည်။ အခန့်ကသင့်ကချစ်သူများမည်။ အိမ်ထောင်ဆက်များမည်။ အားလုံးကလည်းမိမိကိုချစ်မည်။ ထိုအရာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး အချစ်ဟောင်းရပ်ပြီးအချစ်သစ်စရန်ဝန်မလေးတတ်ပေ။ အချစ်ကဝေများလည်းအသည်းကွဲနိုင်သ ည်။ အသက် (၁၉၊၂၁၊၂၃၊၂၈၊၃၁၊၃၃၊၃၇) နှစ်များ တွင်ဖြစ်မည်။ အသားဝင်း၊ အသားလတ်၊ နှာတံပေါ်၊ ခနာကိုယ်သွယ်လျ၊ မျက်နှာသွယ် မျက်ဝန်းလင်းလက်ကာ စကားပြောမြန်ကာ ခေါင်းမာ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ေ သာ ဖူးစာရှင်နှင့်ဆုံစည်းမည်။
မကာရ ရာသီအချစ်ဘ၀နှင့် ခန့်မှန်းဖူးစာရှင် ပုံရိပ် (Capricorn)
ဒီဇင်ဘာ (၂၂) မှ ဇန်န၀ါရီ (၁၉) ကြားမွေးဖွားသော မကာရရာသီဖွား Capricorn များသည် ပေးဆပ်ခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ အရာရာစွန့်လွှတ်ခြင်းများ ဖြင့်ပြည့်လျှမ်းနေသော အချစ်ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ တစ်ပါးသူစွန့်ပစ်နင်းချေလိုက်သောပန်းပွင့်ကလေးကိုမှ သနားစိတ်၊စာနာစိတ်ဖြင့် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ပန်ဆင်တတ်သူများဟုလည်းဆိုသ ည်။ အချစ်တစ်ခုထဲနှင့်အရာရာကို ကောင်းစေအံ့ဟူသော စိတ်မျိုးဖြင့်ပေးအပ်ဆက်ဆံတတ်သောသူဖြစ်သည်။ မိမိသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကိုယ်ချစ်ရသူအပေါ်မည်သို့ကောင်းေ အာင်၊ အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံရမည် ကိုအမြဲတွေးခေါ်နေမည်။ ချစ်သူရပါကလည်းချစ်သူအတွကသ်ာဆို ပါလျှင် မိမိငိုပြ၊ ရယ်ပြ
အသုံးတော်ခံပြီးချစ်သူစေသမျှ နောက်မတွန့်သောစိတ်ဖြင့်ချစ်တတ်သောချစ်သူဖြစ်မည်။သို့သော်မိမိကကောင်းလွန်းသ ဖြင့် မကောင်းသောသူနှင့်တွေ့ရသည်ဟုကမ္ဘာ့နက္ခတ်ပညာရှင်များကသတ်မှတ်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိလိုသည်ထက်နှိမ့်ချ လွန်းခြင်းသည်လည်း
← သင်္ဘောသီး အသား
2 thoughts on “လရာသီဖွားများ၏ အချစ်နှင့်ဖူးစာရှင်”
k khine mon lwin says:
ကုမ် ရာသီလည်းမတွေ့ပါလား Please